A Successful Silicon Valley Burmese Tech Entrepreneur Registration, Myanmar - EventNook
Title: A Successful Silicon Valley Burmese Tech Entrepreneur
Date: Tuesday, 12 Feb 2019 05:00 PM
Place: Phandeeyar, 30th Street, Yangon, Myanmar (Burma), 30th Street, Yangon, Yangon Region, Myanmar
A Successful Silicon Valley Burmese Tech Entrepreneur
Phandeeyar Tech Meet up
Tuesday, Feb 12, 2019, 05:00 pm - 07:00 pm
Phandeeyar, 30th Street, Yangon, Myanmar (Burma), 30th Street, Yangon, Yangon Region, Myanmar
Startup တှနေဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူတိုငျး Silicon Valley ကိုမသိတဲ့သူ မရှိသလောကျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့မွနျမာနိုငျငံနဲ့ Silicon Valley ကွားမှာ အဆကျအစပျက မရှိသလောကျရှားပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျပွုလုပျမယျ့ Fireside Chat မှာတော့ Silicon Valley မှာ အခွပွေုထားတဲ့ နာမညျကြျော company တဈခုဖွဈတဲ့ Boomerang ရဲ့ Co-founder နဲ့ Chief Product Officer ဖွဈသူ မအေးမိုး ကသူရဲ့ ၈ နှဈတာအတှအေ့ကွုံလေးတှကေိုပွောပွပေးသှားမှာပါ။ Boomerang ဆိုတာကတော့ အီးမေးလျရေးနစေဉျ အကွံဉာဏျတှကေိုအခြိနျနဲ့ တဈပွေးညီ ဖျောပွပေးတဲ့ software တဈခုပါ။ အသေးစိတျဖတျရနျ - https://www.boomerangapp.com/ မအေးမိုးဟာ ဖနျတီးရာ စတငျစဉျအခြိနျအခါက ငှကွေေးပိုငျးဆိုငျရာကိုအကူအညီ ပေးခဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ အခုလိုမြိုး နညျးပညာကို ခဈြမွတျနိုးပွီး အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါကို ရောကျရှိနတေဲ့ မအေးမိုးနဲ့ စကားစမွညျကို အခုပဲ လကျမလှတျပဲ အခမဲ့ စာရငျးသှငျးလိုကျပါ။ https://bit.ly/2UpnJKG
Startup တွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတိုင်း Silicon Valley ကိုမသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Silicon Valley ကြားမှာ အဆက်အစပ်က မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြုလုပ်မယ့် Fireside Chat မှာတော့ Silicon Valley မှာ အခြေပြုထားတဲ့ နာမည်ကျော် company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Boomerang ရဲ့ Co-founder နဲ့ Chief Product Officer ဖြစ်သူ မအေးမိုး ကသူရဲ့ ၈ နှစ်တာအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ Boomerang ဆိုတာကတော့ အီးမေးလ်ရေးနေစဉ် အကြံဥာဏ်တွေကိုအချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးတဲ့ software တစ်ခုပါ။ အသေးစိတ်ဖတ်ရန် - https://www.boomerangapp.com/ မအေးမိုးဟာ ဖန်တီးရာ စတင်စဉ်အချိန်အခါက ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကူအညီ ပေးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး နည်းပညာကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မအေးမိုးနဲ့ စကားစမြည်ကို အခုပဲ လက်မလွတ်ပဲ အခမဲ့ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။ https://bit.ly/2UpnJKG
Folks from startup communities are always familiar with Silicon Valley but there are very few engagements between Silicon Valley and Myanmar. But this time, we haveaburmese tech entrepreneur from Silicon Valley in the house, Ma Aye Moah who is the Co-founder & CPO of Boomerang, makers of thoughtful productivity software that helps you focus what matters Check out more here - https://www.boomerangapp.com/ Ma Aye Moah also supported Phandeeyar in our early days. Register for free now not to miss this opportunity through the cracks! https://bit.ly/2UpnJKG
Phandeeyar, 30th Street, Yangon, Myanmar (Burma), 30th Street, Yangon,Yangon Region, Myanmar
11th Floor, "Mac Tower" Building
561 Merchant Road, Yangon